Lucidchart: Bata pamwe Uye Kuona Wako Wireframes, Gantt Charts, Sales Maitirwo, Marketing Automations, uye Mutengi Journeys | Martech Zone
Chishanu, May 6, 2022 Chishanu, May 6, 2022 Douglas Karr
Kuona kunofanirwa kana zvasvika pakudonongodza maitiro akaoma. Ingave iri purojekiti ine Gantt chati yekupa tarisiro yedanho rega rega rekutumira tekinoroji, otomatiki ekushambadzira anodonhedza kutaurirana kwemunhu kune tarisiro kana mutengi, maitiro ekutengesa kuona kupindirana kwakajairwa mukutengesa maitiro, kana kunyange dhayagiramu ona nzendo dzevatengi vako… kugona kuona, kugovana, uye kubatana pamaitiro idanho rakakosha mukufunga uye kuita maitiro.
Kwemakore, izvi zvakaitwa nerobust desktop software seVisio, kana kungoitwa muchiratidziro senge Powerpoint. Nekudaro, desktop software haingope nzira dzezvikwata zviri kure, zviwanikwa, uye vatengi. Enter Lucidchart, a cloud-based diagramming application inounza zvikwata pamwechete kuita sarudzo dziri nani uye kuvakira ramangwana.
Lucidchart Visual Workpace
Lucidchart inzvimbo inoonekwa yekushandira iyo inosanganisa dhayagiramu, kuona data, uye kubatana kuti ikurumidze kunzwisisa uye kutyaira hunyanzvi. Neiyi intuitive, gore-yakavakirwa mhinduro, chero munhu anogona kudzidza kushanda nekuona uye kubatana munguva-chaiyo uchivaka machati anoyerera, mockups, UML dhayagiramu, nezvimwe.
ne Lucidchart, vanhu uye zvikwata zvinogona nyore mepu madhayagiramu ane akajairika maitiro matemplate. Zvakanakira zvepuratifomu zvinosanganisira:
Gadzira chiono chakagovaniswa -Kurumidza kuona maitiro echikwata chako, masisitimu, uye chimiro chesangano. Hungwaru dhiyagiramu inoita kuti iwe utarise pfungwa dzakaoma nekukurumidza, zvakajeka uye zvakanyanya kubatana.
Wana munhu wese papeji imwe chete -Mutauro wakajairika unomhanyisa kubatana uye unovandudza kutaurirana. Chishandiso chinouya neshanduro, chimiro-chaicho makomendi, mu-editor chat, real-time co-authoring, kushandirapamwe cursors, uye zviziviso.
Upei zvirongwa - Lucidchart inokubvumira kuti urambe wakatarisa uye uchimhanyirira mberi nechinangwa. Hunza kuhupenyu zvirongwa zvinosimudzira bhizinesi rako.
Iyi puratifomu ndeye bhizinesi-yakagadzirira gwaro repository rinobatanidza ne Google workspace, Microsoft, Atlassian, Slack, nezvimwe.
Iyo application yakasimba zvekuti ndiri kuzoishandisa kune wireframing futi. Ivo zvakare vanopa kugona kuwedzera machati esangano, iPhone mockups, UML dhayagiramu, network dhayagiramu, mepu dzepfungwa, saiti mepu, Venn dhayagiramu, nezvimwe.
Lucidchart inotibatsira kuona kugadzirisa matambudziko akaomarara nekugadzira dhiyagiramu yekuvaka uye machati anoyerera anogadzira kujeka uye anobatsira timu yedu yakagoverwa kusimuka nekukurumidza pacodebase uye masisitimu. … Inobvumira nhengo dzechikwata dzakawanda kuti dzibatane panguva imwe chete, zvichiita kuti zvive nyore kushanda muchikwata chakaparadzirwa zvizere.
Kutanga kuri nyore uye kune toni yezviwanikwa paYouTube chiteshi kana iwe uchida kutanga nekushandisa chikuva. Ipuratifomu zvakare ine nharembozha uye piritsi maapplication paIOS ne Android.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we lucidchart uye ndiri kushandisa chinongedzo ichi muchinyorwa ichi pamwe chete nemamwe maaffiliate link.
Tags: kubatsiranarwendo rwevatengikuyerera madhayagiramumugeragantt chatilucchchartmaitiro ekugadzira mepumarketing automationchiveraprocess flowprocess mappingmaitiro ekutengesakubatana kwebokaUML dhayagiramunzvimbo yebasa yekuonakuona nzvimbo yebasawaya